Yini okulungele ukuhamba ngebhayisikili yegiya elungisiwe? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > Ibhayisikili lamagiya angaguquki - izixazululo eziqondiswe esenzweni
Ibhayisikili lamagiya angaguquki - izixazululo eziqondiswe esenzweni
Yini okulungele ukuhamba ngebhayisikili yegiya elungisiwe?
Kulungisiwe-igiyaamabhayisikili enza amabhayisikili amahle asebusika, kepha futhi agibela kakhulu emadolobheni, inqobo nje uma ungadingi ukubhekana nanoma yimaphi amagquma amade, amade. Ukushoda kwamashintshi kusho ukuthi kukhona ukuphazamiseka okumbalwa, kanye nekhono lokulawula i-isivininingqo ngokudluliswa kukunikezaewusizoukulawula okungeziwe.Meyi 6, 2021
Mina noChris size lapha namuhla ngenhloso eyodwa futhi lokho ukufunda ukugibela ibhayisekili lamagiya angashintshi - angikaze ngigibele ibhayisikili elihleliwe selokhu ngagcina ukubona lo mfana ngo-2012 umzila futhi lokho bekuyizwe elikude nokushayela i-fixie indawo yasemadolobheni. Kunezizathu ezimbalwa ongahle ufune ukugibela ibhayisikili elihleliwe ngaphandle, esinye sazo yisondlo esiphansi futhi mhlawumbe ukuzwa kwalolo drayivu kuqonde esondweni langemuva - noma mhlawumbe injabulo enkulu yokugibela ibhayisikili eliyisisekelo. - Kunganjani siqale ekuqaleni bese siqala kancane? - Ngicabanga ukuthi lo ngumqondo omuhle uChris - Ake sizame. - Asikwenze. (amabhithi asemadolobheni) - Kunento eyodwa ebaluleke kakhulu okufanele uyikhumbule lapho ugibela i-fixie nokuthi imilenze yakho ihlala ijikeleza njengoba umfutho wamasondo, ama-cranks, nemilenze yakho kwanele ukukugcina uhamba futhi mhlawumbe aphonse phezu imigoqo. (Blond man moans) Ngaphambi kokuthi uqalise, qiniseka ukuthi ubheka i-fixie yakho futhi ngizoqala ngokubheka ukuthi isondo lakho langemuva liqondile futhi liqinile.
igiya lokuhamba ngebhayisikili
Futhi lokhu kubaluleke kakhulu nge-fixie ngoba yiphuzu lakho lesikhonkwane hhayi nje kuphela ekukhuliseni amandla akho, kepha futhi nakubhuleki lwakho. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu. - Ngikwenzile mina manje manje, kepha uma ukhathazekile kufanele ukuthi isitolo sakho samabhayisikili sendawo usihlole - Yebo, leso iseluleko esihle.
Futhi lapho ukwenzile lokho, ngidlulela ekuphakameni kwesihlalo sakho ngoba usinciphisa kancane, cishe isigamu se-intshi ukusuka kulokho ovame ukukugibela ngebhayisikili lakho lomgwaqo, kuzokuvumela ukuthi uhambe ngebhayisikili kakhulu Ukuhamba ngempumelelo ekujikeni kwezobuchwepheshe nakuwo wonke amaqhinga owenzayo, kepha kuyasiza futhi nangamandla angena ngemilenze yakho lapho unyathela amabhuleki. kufanele siqale? - Yebo, uma wenelisekile futhi ujabule ngebhayisikili lakho, angiqondi ukuthi kungani kungenjalo. - Asikwenze. (ukushaya ngokulinganisela emadolobheni) manje sesiyazi ukuthi singakwenza kanjani ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi sibheke ukuthi singamisa kanjani futhi ngihambe nesiqeshana esithile kuma-pedals. - Yebo, futhi ngicabanga ukuthi lowo ngumqondo omuhle impela, futhi ngincoma ukuthi uzame futhi ekhaya ngoba ikunikeza ukuphepha okwengeziwe uma uphonsa iseva emuva ukuze usebenzise amabhuleki. asiqale, akunjalo? - hamba! (eshaya izandla) Amazwe amaningi anebhuleki langaphambili njengesidingo esincane sezomthetho.
Uma ubheka amabhuleki akho angemuva yimilenze yakho, kusho ukuthi ungasebenzisa ngempumelelo amabhuleki amabili, njengokujwayelekile. Ngingasebenzisa ibhuleki lakho langaphambili kubhuleki wangempela, ukwehla igquma ngokwesibonelo, noma ukuma okungazelelwe, kepha kunoma yini enye engingayincoma ukuthi usebenzise imilenze yakho njengokubopha amabhuleki - uma usukuma ukusheshisa kufanele usebenzise kancane ingcindezi yokubala Ukuzivocavoca umzimba ama-cranks; lokhu kukususa kancane esihlalweni ekuqaleni, kepha kuba yimvelo ngokuhamba kwesikhathi. Kungenzeka impela ukukhiya ukubopha ngemuva, njenganoma yiliphi ibhayisikili, kepha angikwazi ukucabanga ngesizathu sokuthi kungani kufanele.
Ama-skids angabukeka emuhle impela. Into ebaluleke kakhulu okufanele uyikhumbule ukulinganisa amandla ngobumnene ngemilenze yakho. Kuthatha umkhuba ukwahlulela ukuthi ungakanani amandla okufanele uwasebenzise, ​​kepha ngemuva kwesikhashana kuba konke okwemvelo. (amabhithi asezingeni eliphakathi nendawo asezindaweni ezisemadolobheni) - Manje usukwazi ukwehlisa ijubane nokuma, manje usufuna ukugxila ku-swing.
Futhi akuyona into elula ngaso sonke isikhathi ukuqala kuleli phaseji - Cha, unendawo eyodwa enhle kakhulu lapho kukhethwe khona igiya Elikhulu, umngani. Ngakho-ke ufuna ukugxila ekugcineni lowo mfutho ngokuskena umgwaqo ophambi kwakho nemigwaqo abanye abazoyenza, indawo esondelayo nobungozi obuzungeze emgwaqeni - le yiPeriod enhle kaChris.- Ngoba uma wazi ukuthi yini eza endleleni yakho, unganciphisa ijubane ngaphambi kokuba ufike kuyo futhi lokho kuzokusiza ukuthi uhlale ugingqika. - Ngokuyinhloko sithi ngokuba ngumsebenzisi omuhle futhi ocabangelayo, uzokwazi kalula ukuqhubeka nokuqina- yebo, lokho kunengqondo - kepha kuthiwani ngamagquma? - Ah, nginecebo ngaye. - Hhayi-ke, ukudluliswa kwamandla okuqondile kwebhayisikili kuzokuvumela ukuthi ukhuphuke ukuthambekela okunzima kakhulu ngegiya elifanayo kunalokho ongakwenza ngebhayisikili lakho elijwayelekile.
La mabhayisikili angandiza impela ekukhuphukeni. Ebhayisikili lomjaho, angikukhuthazi ukuzibekela ijubane elithe xaxa ekukhuphukeni; ukukhuphuka okuhle kwesekhondi eliyishumi kungahamba ibanga elide ku-fixie. (amabhithi asemadolobheni) - Manje sesiphephe kancane emabhayisikili ethu, mhlawumbe kufanele sizame amakhono athile ayisisekelo.
Futhi lawa makhono angakusiza ngisho nasemgwaqweni ovulekile - Yebo, kunjalo, angakusiza. Futhi-ke ake siqale ngesitandi sethrekhi. Igiya elilungisiwe empeleni likwenza kube lula kakhulu ngathi ukuthi silinganise kahle, ikakhulukazi ebangeni elingelona elifanele, njengoba ungashelela emuva ukuze ugcine isikhundla esifanelekile. - Ngizozama? - Yebo - masikwenze. (ukushaya kancane emadolobheni) Ukuhamba nge-fixie yibhayisikili elifanele lokubuyela emuva - yize kuyikhono elingenamsebenzi ngokuphelele, kuyintokozo yangempela yokupaka izimoto - kepha ukuzijwayeza kwenza isimo sokwenza okuhle, ngakho-ke umkhuba wemizuzu engama-30 ungahamba ibanga elide. (ukushaya kancane emadolobheni) Ngakho-ke ufunde ukugibela i-fixie futhi wafunda namakhono athile, kepha yini enye ongayenza? - Ukulungiswa kahle kusetshenziselwa ukuhamba.
Zisetshenziswa yizithunywa ezithunyelwa emadolobheni. Futhi abantu basabagibela, ngaphakathi nangaphandle kwe-velodrome. - Ngakho-ke kukhona umhlaba wonke we-fixie oshayela lapho.
Abanye ochwepheshe baze bayisebenzisele ukuqeqeshwa ebusika. - Yebo, kuhle ukukuxuba. (ukushaya kancane emadolobheni) Sethemba ukuthi lawa mathiphu akufikise lapho wenza ukulungisa. - Yebo, ngakho-ke uma uyithandile le ndatshana, sicela usinike isithupha - Futhi ukuze uthole eminye imiyalelo chofoza lapha - Noma lapha.
Ingabe i-Fixed Gear iyingozi?
Uma unamabhuleki, i-aukulungisaakusekhokuyingozikunejubane elilodwa uma ujwayele ukungakwazi ukugudla ugu. Kalula nje, kufayela le-ukulungisa, uma ibhayisikili lihamba, kufanele ube ugwedla.Meyi 30, 2013
Kungani amabhayisikili egiya angalunganga engalungile?
Ngokuqinisekile, ukuthola ifayela le-ukulungisakuyintokubiumqondo wabagibeli abaningi. Ukugibela akulungisiwe-gear kuthatha isikhathi ukujwayela. Futhi akuyona eye-out-shape, futhi uma unayokubiamadolo, egibelekulungisiwekungabenza babe babi kakhulu. Kepha ukushushuluza kweTelemark kungakulimaza namadolo akho.UJun 5, 2013
Ungakwazi yini ukuyeka ukunyathela ngebhayisikili legiya elinqunyiwe?
Impendulo emfushane ithi cha. Useibhayisikili lamagiya angashintshiama-pedals nangemuvaisondozixhunywe ngqo, okusho ukuthi ngemuvaisondoIyaphotha, ama-pedals nawo ayajikeleza. Ngenxa yalokhu,wenaayikwazi ukugudla i-ibhayisikili lamagiya angashintshifuthi kufanele unyakaze njaloibhayisikiliiyahamba.Ephreli 26, 2018
Ngabe ukulungiswa kuyashesha kunamabhayisikili omgwaqo?
Yebo,amabhayisikili omgwaqounamagiya amaningi, kepha aukulungisaungaba nelinye lalawo magiya. Kungaba futhi namathayi alinganayo alinganayo nezikhala. Ngakho-ke, uma ufanisa izilinganiso zamagiye nezinye izilinganiso ezifanele, aukulungisaangahamba njengoba njengokusheshayiba ne-ibhayisikili lomgwaqouma ikulelo giya elifanayo.Ngomhlaka 20, 2020
Kungani ama-fixies athandwa kangaka?
Esikhathini se-digital, lapho konke okufunayo kuyinto elula, futhi enokwethenjelwa, njengebhayisikili owawunalo ngenkathi useyingane owenza umsebenzi wenziwe.Ukulungiswaingakusiza uthenge kulokho kube lula ngaphandle kokukhokhela izindleko. Ukushova ngokushesha, uya ngokushesha okukhulu. Ukuhamba kancane, uhamba kancane.
i-apula cider uviniga njengesiphunga
Ngabe amabhayisikili egiya amisiwe ngokushesha?
Iphendulwe Ekuqaleni: Ingabe i-fixie ngokusheshakune-aisivinini esisodwaisondo lezimoto? Awukho neze umehluko phakathi kwe-kulungisiwe-igiyafuthi ifakwe mahhalasingle-speed ibhayisikili. Lapho ushaya uphethiloli wesitimelaibhayisikili, akukho ukunyakaza okuhlobene phakathi kwe-sprocket nesondo- njenge-igiya elingaguquki.
Ingabe kufanele ngithenge ibhayisikili elingenalo igiya?
Ijubane elilodwaibhayisikiliKulula kakhulu ukugibela futhi ikuvumela ukuthi ugxile ekujabuleleni ukugibela kunokushintsha okwakhoamagiya. Isondlo Esiphansi. Ijubane elilodwaamabhayisikiliukunakekelwa okuphansi kakhulu ngoba azikho izingxenye eziningi ezihambayo eziqhathaniswa ne-multispeedamabhayisikili.Aug 26, 2015
Ngabe amabhayisikili e-fixie awekho emthethweni?
'Ukuzwa kolawulo' uMichael ugibele aukulungisa- ukukulungisiwe-ibhayisikili elinamasondo - elingenayo ibhuleki langaphambili. Lokhuengekho emthethweni. Ngemuvakulungisiweisondo likaukulungisa- lapho umgibeli anganciphisa ukusebenzisa ama-pedals - kubalwa njenge-brake.Aug 24, 2017
Ngabe ukugibela ibhayisikili elinqunyiwe kunzima?
Ukugibela kulungisiwekuzokuphoqa ukuthi usebenzeNgokuqinile kakhulungezikhathi ezithile kunendlela ongathanda ngayo ku-ibhayisikili elilungiselelwefuthi uzoqina futhi ulunge ngokwengeziwe ngenxa yalokho. Ungathola umuzwa ofanayo kusuka kusinglespeedibhayisikilinge-freewheel, kodwa…Februwari 26, 2019
Luhlobo luni lwebhayisikili igiya elilungisiwe?
Amabhayisikili we-Fixed Gear. Ama-Fixed Gear Bikes, ama-single-speed Bikes, nama-Track Bikes awaziwa nangokuthi ama-fixie bikes, alungele ukugcwala emigwaqweni noma ukushaya i-velodrome yendawo. Ibhayisikili lamagiya angashintshi yibhayisikili elilula kakhulu, elehlisiwe, nelincane emakethe namuhla.
Kungenzeka yini ukubuyela emuva ngebhayisikili legiya elinqunyiwe?
Futhi kwenza ukuthi kube lula ukujikeleza ngebhayisikili. Njengomthetho ojwayelekile, amabhayisikili anamagiya angaguquki anejubane elilodwa. I-derailleur yokukhetha igiya izokwethula ukuxega kwamaketanga, okungaphazamisa ukubopha amabhuleki. Ukukhethwa kwamagiya, noma kunjalo, kungafezwa ngokusetshenziswa kwehabhu elungiselelwe ngaphakathi.
Luhlobo luni lwamabhuleki ibhayisikili elisebenza kahle?
A: Amabhayisikili anejubane elilodwa ngokuvamile eza nebhuleki langaphambili nangemuva. Ama-fixies avame ukuxubana. Ukubhreyiza ngesondo langemuva ngebhayisikili yegiya elungisiwe, umisa ama-cranks, abizwa ngokuthi ukushibilika. Ngezizathu zokuphepha, amabhayisikili amaningi we-fixie afaka okungenani ukubopha kwesondo langaphambili.